မက္ကဆီကို၏လွတ်လပ်ရေး၏အကောင်းဆုံး 46 စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
မက္ကဆီကိုသည်လွတ်လပ်ရေးရသောအခါ (၁၈၁၀-၁၈၂၁) ၎င်းသည်နိုင်ငံသားအားလုံး၏လူမှုရေးတိုးတက်မှုဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစကားစုများသည်သင်၏သမိုင်းကိုအနည်းငယ်ပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ဤသမိုင်းဆိုင်ရာအခိုက်အတန့်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ဖူးသောထိုအချိန်တွင်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သောဇာတ်ကောင်များစွာရှိသည်။
နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးသို့မဟုတ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်ပtheိပက္ခတစ်လျှောက်လုံးအရေးကြီးသည်။ သူတို့မှာအကောင်းဆုံးလက်နက်ကမိန့်ခွန်းထဲကစကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်၊ မင်းတို့မင်းတို့ပြသမယ့်စကားစုတွေကိုသမိုင်းနဲ့ဒီနေ့မှာပြိုလဲသွားပြီ၊ မှတ်မိခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဆက်ပြီးပျော်မွေ့နိုင်တယ်။
ကက်သလစ်ဘာသာတရားကိုအသက်ရှည်ပါစေ။ အသက်ရှည်ရှည် Fernando VII! အမိမြေကိုသက်တမ်းရှည်စွာနေထိုင်ပြီးဤအမေရိကန်တိုက်ကြီးတွင်အစဉ်အမြဲအုပ်စိုးပါ။ အဆိုပါ gachupines သေဆုံး! မကောင်းတဲ့အစိုးရမှသေခြင်း! နာကျင်မှုအော် - Miguel Hidalgo y Costilla ။
တရားမျှတမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်ကြားသူတိုင်းတွင်သူ့အားနားထောင်ပေးသော၊ အကာအကွယ်ပေးသည့်တရားရုံးရှိရမည်။ -Jose maria morelos နှင့် pavon ။
ဒီမိုကရေစီမရှိလျှင်လွတ်လပ်မှုသည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ -Octavio Paz ။
တော်လှန်ရေးလွတ်လပ်မှုကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဏာဖြင့်ဖျက်ဆီးသည်။ -Carlos Fuentes
အမျိုးသားများကဘာမှမရှိ၊ -Benito Juarez
မည်သည့်မြို့နှင့်မြို့၏အရွယ်အစားကိုမဆိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမွေးဖွားလာခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏အလုပ်၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ ညီအစ်ကိုများကိုချီးမြှောက်ရန်နှင့်ကြွယ်ဝစေရန်သူတို့၏ဆန္ဒ၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ - Ignacio Allende
ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာလူသား၏လွတ်လပ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်မှု၊ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောလက်ရုံးဖြစ်သည်။ -Benito Juarez
တစ် ဦး ချင်းစီအကြား၊ အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားခြင်းသည်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်သည်။ -Benito Juarez
အချိန်ကာလတိုင်းတွင်အဝိဇ္ဇာနှင့်ညစ်ညမ်းသောအမြင်သည်စိုးမိုးမှုအတွက်ကျေးကျွန်များ၏နွားများ မှလွဲ၍ ဘာမျှမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ -Emiliano Zapata ။
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတားအဆီးတွေကိုကျော်ပြီးကျော်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမတားဆီးနိုင်လောက်အောင်အားစိုက်ထုတ်မှုအားလုံးနီးပါးရှိပါတယ်။ - ဂွာတာလိုးဗစ်တိုးရီးယား
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတားအဆီးတွေကိုကျော်ပြီးကျော်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမတားဆီးနိုင်လောက်အောင်အားစိုက်ထုတ်မှုအားလုံးနီးပါးရှိပါတယ်။ -Guadalupe ဗစ်တိုးရီးယား။
အမျိုးသမီးများသည်သမိုင်းတွင်မေ့ပျောက်ခံနေရသူများဖြစ်သည်။ စာအုပ်များသည်သူတို့ကိုချီးကျူးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ –Elena Poniatowska ။
သက်တမ်းအရှည်ဆုံး Guadalupe ၏မိခင်ဖြစ်သည်။ မကောင်းတဲ့အစိုးရမှသေခြင်း။ သက်ရှိထင်ရှားဘာသာရေးနှင့် gachupines သေဆုံး။ - နာကျင်မှု၏ပထမဆုံးငို
အချိန်ကာလတိုင်းတွင်အဝိဇ္ဇာနှင့်ညစ်ညမ်းသောအမြင်သည်စိုးမိုးမှုအတွက်ကျေးကျွန်များ၏နွားများ မှလွဲ၍ ဘာမျှမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ - Emiliano Zapata
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပိုမိုဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်မှာမျှတမှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုပြောဆိုကြသည်။ - Francisco Villa
ဖန်တီးမှုရှိဖို့ဆိုရင်မင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာတရားသူကြီးကိုပိတ်ထားရမယ်။ -Guadalupe Nettel ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပိုမိုဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်မှာမျှတမှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုပြောဆိုကြသည်။ -Francisco ဗီလာ။
တိုင်းပြည်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ရောက်ရှိလာသူများ၏ပိုလျှံမှုလည်းမရှိ၊ ထွက်ခွာသွားသူများအတွက်လည်းလိုအပ်ခြင်းမရှိပါ။ –Venustiano Carranza ။
ယုတ္တိဗေဒအတွက်ဘဝကိုတောင်းဆိုသူများသည်ဘ ၀ သည်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမေ့သွားကြသည်။ အိပ်မက်တွေမှာယုတ္တိမရှိဘူး။ နိုးဖို့စောင့်ကြည့်ရအောင်။ အာရုံကြော။
တိုင်းပြည်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ရောက်ရှိလာသူများ၏ပိုလျှံမှုလည်းမရှိ၊ ထွက်ခွာသွားသူများအတွက်လည်းလိုအပ်ခြင်းမရှိပါ။ - Venustiano Carranza
ဒီမိုကရေစီမရှိလျှင်လွတ်လပ်မှုသည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ - Octavio Paz
တော်လှန်ရေးလွတ်လပ်မှုကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဏာဖြင့်ဖျက်ဆီးသည်။ - ကားလို့စ် Fuentes
အချုပ်အခြာအာဏာကိုလူမှချက်ချင်းလာသည်။ -Jose maria morelos နှင့် pavon ။
ငါ့မွေးရပ်မြေကပထမပဲ -Vicente Guerrero ။
ကျွန်မဟုတ်ဘဲယောက်ျားအတွက်မဟုတ်ဘဲမူများနှင့်အညီကျွန်ခံလိုသည်။ -Emiliano Zapata ။
အတိတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ကြရအောင်။ –Victoriano Huerta
တရားမျှတမှုမရှိလျှင်အကြီးဆုံးနှင့်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံသည်အားနည်းနေသည်။ -Manuel JoséJoséOthón။
ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စစ်သားတွေများများစားစားရှိပေမဲ့ငါ့ရဲ့သွေးနဲ့ငါကလေးတွေအတွက်အမွေတစ်ခုဖြစ်လာမယ်။ - Josefa Ortiz က de Dominguez
လူတွေကိုရောင်းဖို့သဘာဝတရား၏တောင်းဆိုမှုများကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်, ကျွန်စနစ်၏ဥပဒေများကိုဖျက်သိမ်းနေကြသည်။ -Miguel Hidalgo y Costilla
ကျွန်ုပ်တို့၏မုန်းတီးမှုအတိုင်းအတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တူညီသည်။ -Carlos Fuentes
ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့စစ်သားတွေများများစားစားရှိပေမဲ့ငါ့ရဲ့သွေးနဲ့ငါကလေးတွေအတွက်အမွေတစ်ခုဖြစ်လာမယ်။ -Josefa Ortiz de Dominguez ။
လွတ်လပ်ရေးရ! အမေရိကကိုအသက်ရှည်ပါ။ မကောင်းတဲ့အစိုးရမှသေခြင်း! -Miguel Hidalgo y Costilla
အလင်းတော်တော်များများဟာအရိပ်တွေအများကြီးနဲ့တူတယ်၊ ဒါကမင်းကိုမမြင်စေဘူး -Octavio Paz ။
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်သည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်မဟုတ်ဘဲဖခင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။ - Miguel Hidalgo y Costilla ။
လျှာသည်လည်ပင်းကိုစောင့်၏။ - Miguel Hidalgo y Costilla ။
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံ၏ကျေးကျွန်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်မရှုပ်မခံနိုင်သောအချုပ်အခြာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ -Jose maria morelos နှင့် pavon ။
မင်းတိုင်းပြည်အတွက်သေရင်မင်းသေမှာမဟုတ်ဘူး။ - Jose maria morelos နှင့် pavon ။
နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အားကျဆုံးစေခဲ့သည့်ကြီးလေးသောအမှားနှစ်ခုကိုကျူးလွန်မိသည်။ လူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေလို။ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေစစ်များကိုမည်သို့ယုံကြည်ရမည်ကိုမသိခြင်းဖြစ်သည်။ -Francisco Indalecio Madero ။
မည်သည့်မြို့၏မည်မျှပင်အရွယ်အစားရှိပါစေယောက်ျား၊ မိန်းမများမွေးဖွားလာသည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏အလုပ်အရွယ်အစား၊ သူတို့၏အစ်ကိုများတိုးချဲ့ရန်နှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေရန်သူတို့၏ဆန္ဒ၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ - Ignacio Allende ။
အမေရိကသည်အခြားတိုင်းပြည်များမှလွတ်လပ်ပြီးလွတ်လပ်သည်။ - Miguel Hidalgo y Costilla ။
ဖာနန်ဒို ၇ ၏ကံကြမ္မာကိုလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်သောကြောင့်လွတ်လပ်ရေးမျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားပါလေစေ။ –José María Morelos
သင်တို့၏ဘာသာစကားသည်စော်ကားမှု၊ အတုနှင့်လိမ်လည်မှု၊ သူတို့၏ဥပဒေသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်၊ လက်စားချေခြင်းနှင့်မကျေနပ်မှုတို့အပေါ်အခြေခံသောဖိနှိပ်သူများ၏ထမ်းပိုးကိုသင်ခံစားရတော့မည်မဟုတ်။ - Agustínက de Iturbide ။
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်မျိုးတည်းဖြင့်အားသွင်းထားသည့်စစ်မှန်သောတိုက်ပွဲဝင်ငိုကြွေးခြင်း၊ ဤစကားစုသည်စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတည်ပြုချက်၊ စိတ်ကူးယဉ်ရန်သူတစ် ဦး ကိုပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်လေထဲတွင်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သောစက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ကြွေးကြော်ရန်အော်ဟစ်သောအသံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုအခြားသူများအားဆန့်ကျင်။ ကြားမှပင်အတည်ပြုပြောဆိုသည်။ ပြီးတော့ဘယ်သူတွေလဲ။ ကြွင်းသောအရာမှာ "chingada ၏သားများ" ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများ၊ မက္ကဆီကိုဆိုးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများ၊ ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့မဟုတ်သူများအားလုံးဖြစ်သည်။ –Octavio Díaz
ငါတိုင်းပြည်အတွက်သေတော့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသေတော့ပျော်တယ်။ မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကြေငြာလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့သဘောတူတယ် ငါအနားယူတော့မည့်ရင်ခွင်ထဲကဖခင်တစ်ယောက်ငါ့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုစပိန်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ် –Don Manuel Sabino Crespo ။
နေ့စဉ်ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နေ့စဉ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်သည်။ ပေါင်မုန့်ခါးစွာမခံစားရသောငြိမ်းချမ်းရေး။ အာရုံကြော။
လယ်သမားများ၏ကလေးများနှင့်လမ်းသန့်ရှင်းသူများကိုအချမ်းသာဆုံးမြေပိုင်ရှင်အဖြစ်ပညာပေးခွင့်ပြုပါ။ -Jose maria morelos နှင့် pavon ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » မက္ကဆီကို၏လွတ်လပ်ရေး၏အကောင်းဆုံး 46 စာပိုဒ်တိုများ